कोरोनाको आक्रमणमा नै परेपछि
यस अघि साथीहरुमाझ पटक पटक नोबल कोरोना भाइरस कोभिड १९ बाट बच्ने उपायका बारे मसंग सङ्ग्रहित जानकारी बाडेकी थिएँ । तर आज चाहिँ कोरोनाले आक्रमणै गरिहाल्यो भने के हुन्छ भन्ने भय निवारणार्थ पनि मसंग भएका थप जानकारी लिएर आएकी छु ।
विश्वका पाँच करोडभन्दा बढी मानवले १०० बर्षअघि स्प्यानिस फ्लू भन्ने महामारीका बेला ज्यान गुमाएको तथ्य प्रकाशमा आएको छ । हाम्रा लागि उक्त घटना त इतिहास मात्र हो । किनभने हामीले घटनालाई पढ्नु मात्र परेको छ । तर वर्तमानमा संसारभरीका हामी आम मानवका लागि त यो कोरोना धेरै ठूलो सङ्कटका रुपमा खडा भएको छ ।
झन्डै साडे दुई महिनादेखि लकडाउनमा थुनिएका हामी आम नेपाली पनि अब घर भित्रमात्रै बसिरहने हो भने भोकमरीले मरिने पक्का छ र बाहिर निस्कने हो भने कोरोनाको सङ्क्रमणमा परिने सम्भावना छ । अगाडि बढ्दा बाघको आक्रमणमा परिएला भन्ने सन्त्रास र पछाडि फर्किँदा अन्धो कुवामा खसिने डर झैं भएको छ हाम्रो जीवन । तर वीर कहिल्यै पछाडी फर्केर अन्धो कुवामा हाम फाल्दैनन् । बरु आत्मविश्वास जगाएर अगाडि बढ्छन् र बाघलाई नै पराजित गर्छन् । अहिलेको हामी आम मानवका लागि यही नै विशेष पाठ हुन सक्छ ।
हाम्रो देशमा त कोरोनाले च्याउनमात्र सक्ने थियो । भित्र पस्ने हिम्मत कोरोनासंग छदैं थिएन । देशभित्रका जनतालाई लकडाउनमा साँचो लगाइदिएर विदेशी सिमाबाट ह्वारह्वारी कोरोना भित्र्याउने काम हाम्रो सरकारले गरेको छ । त्यसैले हाम्रा लागि लकडाउन सकिनासाथ पुरस्कारका रुपमा सरकारले जताततै कोरोना सजाएर राखिदिएको हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ ।
अब त्यसो भनेर फेरि लकडाउनलाई पेसाझैं गरेर हामी नेपाली जनताले यसैलाई सधैंभरि अपनाउन पनि सकिँदैन । किनभने सधैंको लकडाउनले जनताको पेट पनि भरिँदैन । अर्कातिर डराएर असुरक्षित भविष्य संगालेर घरैभित्र बसिराखेर पनि हाम्रो गुजारा चल्न सक्दैन ।
त्यसैले अब हामीले छिट्टै लकडाउनबाट बाहिर निस्किनै पर्छ । बाहिर निस्केपछि कोरोना कता छ ? कता छैन ? कसलाई छ ? कसलाई छैन ? कसैले भन्न सक्ने कुरा पनि भएन । किनभने व्यक्तिलाई जाँच्ने सामाग्री त हाम्रो सरकारसँग पर्याप्त छैन भने सबै सामाग्री कसरी जाँच्न सकिन्छ र ?
मानिसले पिउने र व्यक्तिगत सरसफाईका लागि त सरकारले स्वच्छ पानी अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा सार्वजनिक स्थानमा रहेका अति आवश्यकीय साधनहरुमा टाँस्सिन सक्ने कोरोनामा परजिवी भाइरसहरु कसरी हटाइएलान् ? यी कठोर प्रश्नहरुको जवाफ दिनसक्ने सरकार नै हामीसँग छैन । त्यसैले सरकारले हामीलाई सुरक्षित वातावरण बनाइदिन्छ र हामी अमनचैनले त्यसको भोग गरौंला भनेर निर्धक्क हुन सकिँदैन ।
त्यसैले लकडाउनबाट बाहिर निस्किनु हामीलाई जति आवश्यक छ त्यसभन्दा धेरै हामी त्यसरी घरबाहिर निस्किँदा आफू, परिवार र समूहका लागि आफैं जिम्मेवार हुनु थप आवश्यक छ । किनभने घरबाट निस्केपछि कुनै पनि व्यक्ति वा बस्तुबाट हामीलाई अदृश्य कोरोना सल्किन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । त्यसै कारण कोरोना सन्दर्भमा एकै घरपरिवारकालाई पनि एक अर्काका लागि शंकास्पद व्यक्ति मान्नै पर्ने हुन्छ ।
त्यसैले अब भनिरहनु नपर्ला लकडाउनबाट बाहिर निस्केपछि सबै व्यक्ति र बस्तु कोरोना वाहक हुन सक्छन् भन्ने कुरामा दुईमत नराखौं । त्यसैले कोरोनासंग सम्पूर्ण रुपले सावधानी पहिलो मन्त्र हो । डरत्रास आधारभूमिमात्र हो र साहस संयन्त्र हो । मैले साथीहरुलाई डराएर खाटमुनी लुक्नुपर्छ भन्न खोजेको अर्थ पटक्कै नलागोस् ।
एउटा कुरा भनिहालौं कि हालसम्म विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या ५० लाखभन्दा बढी पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अनि कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या करिव तीन लाख रहेको छ । मैले नअथ्र्याउँदा पनि हुने हो , कोरोना लाग्दैमा मरिँदैन । तर कोरोना लागेपछि मर्न पनि सकिन्छ ।
यति कुरा त हामीलाई नै थाहा छ । फेरि किन यसको गन्थन सुन्ने भन्ने पनि साथीहरुलाई लाग्न सक्छ । तर आजको मेरो ध्येय कोरोना संक्रमणबाट कसरी बाँच्ने नभएर कोरोना नै लागिसकेपछि कसरी बाँच्ने भन्ने हो ।
कोरोना लागिसकेपछि त्यसका लागि नियम पुर्याउन आफ्नै वासस्थानमा सबैका लागि सहज नहुन पनि सक्छ । अनि हाम्रा सरकारी अस्पतालले कति जनालाई निशुल्क र भरपर्ने सेवा देलान् ? निजी अस्पतालले कति शुल्क लिने हुन् ? त्यहाँ हाम्रा लागि कति सहज र सुरक्षित सेवा प्राप्त होला ? यस्तो आक्रान्त बखतमा थप आतंक फैलाउने मेरो मनशाय पटक्कै होईन । तर हाम्रा स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाहरुले विगतमा पनि आम जनस्वास्थ्यसँग कति भरपर्दा, इमानी र जिम्मेवारीपूर्णका भूमिका निर्वाह गरेका छन् ? भन्ने प्रश्नको नकरात्मक उत्तर कुनै पनि चेतनशील नेपालीसँग सुरक्षित छ । त्यसैले सकेसम्म सावधान भएर कोरोनाको संक्रमणबाट बाँच्ने अथक कोसिस गरिरहनु जति बुद्धिमान काम अर्र्को हुन सक्दैन भन्ने मेरो पनि आशय हो र अनुरोध हो । अझ अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि साझा गर्दछु ।
यो कोरोनाको संक्रमणका लागि कतिदिन सावधान हुने ?
यो प्रश्न पनि मैले धेरै सुनिसकेकी छु । त्यसको पनि मैले यहीँ उत्तर दिनुपर्ने छ ।
अहिलेसम्म संसारसंग नोबल कोरोना कोभिड १९ को संक्रमणको प्रारम्भ मितिमात्र छ । यो संक्रमण समाप्त हुने मितितिथी कसैसंग छैन । अर्थात् यस कोरोनासंग हामीले कहिलेसम्म लडाईँ लड्ने हो ? यसको कुनै टुंगो नै छैन ।
आत्तिनु भयो मेरो कुरा सुनेर ? नआत्तिनुस् है ।
यसको समाधानको उपाय पनि मसंगै छ । के होला भन्नुस् त ?
यसको समाधान भनेको कोरोना उन्मूलनको भ्याक्सिन बनेर सो भ्याक्सिन तपाईँका लागि सुलभ हुञ्जेलसम्म अथवा तपाईँको पहुँचमा नआएसम्म तपाईँ अहिले जसरी सावधान रहनुभएको छ त्यसरी नै सावधान रहनुपर्छ ।
यसको समाधान भनेको कोरोना उन्मूलन भ्याक्सिन बनेर सो भ्याक्सिन तपाईँका लागि
आयो भन्नुहोला । नभन्नुस् ।
किनभने जीवनशैली नै सोही अनुरूप बनाउनुस् । अब हामीले सधैँ यसरी नै बाँच्नु पर्छ भन्ने मानसिक सोच बनाउनुस् ।
मानिस प्राणीहरूमध्येकै मानसिक रूपले अत्यन्त शक्तिशाली जीव हो । प्रकृतिमा मानिसभन्दा शारीरिकरूपले शक्तिशाली अन्य धेरै प्राणी भए पनि मानिसले आफ्नो मानसिक शक्ति परिचालन गरेर नै शक्तिशाली प्राणीहरूलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सकेको हो ।
पृथ्वीमा मानिस नै यस्तो प्राणी हो जसले संसारमा जे चाह्यो त्यही पाउन सक्छ । देवलोकका देउताहरू पनि मानिसको प्रवल ईच्छाशक्तिको सफलता देखेर एकपटक मानिसको जुनी लिएर पृथ्वीमा आउन पाए परमपद प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर लोभ गर्छन् भन्ने कुरा धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ । अर्थात् दृढ ईच्छाशक्ति र लगनशीलता भएका मानिसका लागि असंभव भन्ने शब्द नै हुँदैन ।
यति हुँदाहुँदै पनि बढो दुखको कुरा के छ भने हामी नेपालीले चाहिँ कोरोना संक्रमणबाट बच्न पूर्ण सावधानी अपनाइरहेका छैनौँ । खास गरेर हाट बजारका बिक्रेता र क्रेता सबैजसो आम मानवहरूले पर्याप्त सतर्कता तथा सामाजिक दूरी कायम गरिराखेका छैनौ ।
जबसम्म आफ्नै घरमा मान्छे मर्दैन तबसम्म मानिसमा सम्बन्धित कहरको डर नहुने रहेछ कि के हो ? परिवारमा वा आफैँमा सल्केको कोरोना निवारणभन्दा कोरोना नसल्कोस् भनेर सावधान बस्नु ठूलो बुद्धिमानी हुने हो । तर तरकारी बजारको हालत देख्दा हामीमा भएको स्वास्थ्य चेतनाको स्तर निकै तल छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमै देखिएको छ ।
दुखको कुरा हो नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ ।
तर खुसीको कुरा मृतकको संख्या वृद्धि भएको छैन ।
त्यसैले साथीहरू ! अब हामी सबै मिलेर आउने युगलाई सुन्दर, स्वच्छ र प्राणीमात्रका लागि कल्याणकारी बनाउने प्रण गरौँ । हामी आफू पनि सहज भएर बाँचौँ र हाम्रा सन्ततीलाई पनि सहजरूपले स्वच्छ र सुन्दर पृथ्वी हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखौँ । यसका लागि मानिससँग भएको अपार ईच्छाशक्ति र सत्कर्मको परिचालन गरौँ । जीवनशैली बदलौँ ।
सुन्दर सुरक्षित जीवनका लागि केही अवधारणा स्
१. मानव जीवनको अमूल्यता बुझेर दुर्व्यशनमा हुनुहुन्छ भने तुरुन्त त्याग्नु होस् ।
२. घर बाहिरको खानपिनमा रमाउने गर्नु भएको भए कोरोनाको अन्त्य नहुञ्जेल घरको भान्छाघरमा पाकेका खानेकुरा बाहेक अरू बाहिरका नखाने धर्म बनाउनु होस् ।
३. सकेसम्म शाकाहारी बन्नु होस् ।
४. मौसमी फलफूल र तरकारी पर्याप्त मात्रामा खाने गर्नुहोस् ।
५. आफ्नो शरीरमा दैनिक एकभाग अन्न र तीन भाग पानीको आपूर्ति गरेर पृथ्वीसरह बन्नु होस् ।
६. शरीरलाई मोटो बनाउनेपट्टि नलाग्नु होस् , छरितो र स्वस्थ्य बनाउनेपट्टि लाग्नु होस् ।
७. सामान्य व्यायाम, प्राणायाम र ध्यानलाई भोजनभन्दा बढी प्राथमिकतामा राख्नु होस् ।
८. परिवारलाई माया गर्ने नारी जातिले हात खुट्टाका औँलाहरूमा नङ नपाल्नुहोस् । नङ पाल्नु भनेको स्वयम् नारी जातिकै समेत र परिवारका लागि पनि नराम्रो सूचक हो भन्ने कुरा बुझ्नु होस् । संसारभरि नै अधिकांश रूपमा भान्छाप्रमुख रहने नारी जातिद्वारा पालिने नङलाई पूर्वसमयमा पनि र हालको अवस्थामा ज्यादै खतरनाक मानिएको छ । नङ पाल्ने व्यक्तिले दिनमा पटक पटक नङ सफा गरिराख्ने अथवा त्यसमा लुक्ने संक्रमण हटाउने विशेष कार्य गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नङलाई संक्रमण मुक्त नगरिँदा ती नङका कापकापमा रहेका किटाणुले स्वयम् नङ्धारकको मात्र नभएर विगतमा पनि परिवारमै स्वास्थ्य संकट ल्याउने गरेकै हो र यतिबेला भयानक संकट ल्याउने निश्चित छ ।
हेक्का राख्नु होला दिदी बहिनी र आमाहरू ! यतिबेला तपाईँका हातका लामालामा नङले कोरोना वाहकको काम गरिरहेको हुन सक्छ । त्यसैले नङसुन्दरीहरूमा दन्त्यकथाका राक्षशीहरूले झैँ हातखुट्टामा नङ पालेर मानवताको उपहास नगर्न हुन विनम्र निवेदन छ ।
९. हाम्रो स्वास्थ्यको रक्षा गृह भनेको हाम्रो भान्छा घर हो । घर परिसर सबै सफा राख्नु पर्ने कुरा त सामान्य कुरा हो । तर विशेष गरेर हाम्रा भान्छा घर अत्यन्त सफा हुनु आवश्यक छ । हाम्रो भोजन स्वस्थ्य र स्वच्छ हुन सकेमा मात्र हाम्रो स्वास्थ्य राम्रो हुन सक्छ । त्यसैले घरका सबै सदस्यले परिवारको स्वास्थ्यका लागि भान्छा घरको सफाईमा मद्धत गर्नु होस् ।
सकेसम्म प्लाष्टिकका भाँडाकुँडामा खाना नखानु होस् । आल्मोनियमका भाँडामा खाना पकाउने, पानी तताउने काम नगर्नु होस् । तामा, काँच, फलाम वा माटाका भाँडाकुँडा स्वास्थ्यवर्धक हुन्छन् भन्ने कुराको ज्ञान राख्नु होस् ।
१०. स्वास्थ्यका लागि युवा र अधवैँसे व्यक्तिले दैनिक ८ घण्टा निदाउनु पर्छ । आधाघण्टा लगाएर नुहाउनु पर्छ । प्रत्येक गाँस ३२ पटक चपाउने गरी प्रत्येक पटकको भोजनका लागि पर्याप्त समय छुट्याउनु पर्छ । खाना धेरै समय लगाएर थोरै खाने आदत बनाउनु होस् । ईच्छा अनुसार पूजापाठका लागि समय छुट्याउनु होस् र बिस्तारै समय बढाउँदै लानु होस् ।
पहिलो र अन्तिम सत्य भनेको परमात्मामात्रै हुन् भन्ने कुरा बेलैमा आत्मसात गर्नु होस् । सुक्ष्मतम् कणभन्दा पनि दसौँ गुना सूक्ष्म परजिवीको स्वरूपमा अहिलेको कोरोनाले आफ्नो भयावह उपस्थिति देखाएर नरसंहार गरिरहेको छ । संसारका विराट वैज्ञानिक र विशाल धनाढ्यहरूलाई समेत पछारेको सत्यले प्रकृति अथवा परमात्माको महत्त्व बुझ्नु होस् । दैनिक न्युनतम एक घण्टाको समय व्यायाम, प्राणायाम र ध्यानका लागि खर्चिनु होस् ।
११.जीवन क्षणभङ्गुर छ,यसलाई आत्मसात गर्नु होस् । गृहस्थ आश्रममा हुनुहुन्छ भने परिवारको महत्त्व बुझ्नु होस् । आफ्नो लहड, शौख, लक्ष्य र उद्धेश्यमात्र समातेर नबस्नु होस् । लहड, शौख, लक्ष्य र उद्धेश्य त तपाईँ बाँचुञ्जेल तपाईँसँगै रहनेछन् । तर तपाईँ वा तपाईँका परिवारका सदस्यमध्ये जो सुकै पनि क्षणभरमै सदाका लागि पृथ्वीबाटै टाढा पुग्न सक्नेछन् भन्ने कुरा कहिल्यै नबिर्सिनु होस् ।
अहंकार भन्दा ठूलो रोग हुँदैन भन्ने कहिल्यै नबिर्सिनुस् । जातपात, धनीगरिब वा अन्य कुनै पनि विभेदद्वारा मानिसको अपमान नगर्नुहोस् । सबै परमात्माका समान सन्तान हौँ र सबैले एकदिन माटामै मिसिनु पर्छ भन्ने कुरा कहिल्यै नबिर्सिनु होस् । ईष्याको आगोले आफैँलाई भष्म पार्छ भन्ने पनि सदैव याद गर्नुहोस् ।
सकेसम्म सबैसँग सुमधुर व्यवहार गर्नु होस् । हरेकले अर्कालाई पनि आफूजस्तै सम्झिनाले यो सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ । सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सक्नु भएन भने पनि कसैसँग दुर्व्यवहार चाहिँ नगर्नुहोस् । जो सुकैसँगको पनि तपाईँको त्यही भेट नै अन्तिम भेट पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि सधैँ याद गर्नुहोस् ।
तपाईँको जीवनमा आइपरेका जस्तोसुकै समय र परिस्थितिलाई पनि रमाईलोसँग र सहजताका साथ बिताउन सिक्नु होस् । परिवारमा दैनीक हुने झिनामसिना कुरामा बवण्डर मच्चाउने आदत छ भने त्यसको परित्याग गरिहाल्नु होस् । भनाई नै छ, जुन घरमा झै झगडामात्र भइरहन्छ त्यसघरबाट लक्ष्मी पनि डराएर भाग्छिन् । त्यसैले हरेक पल मनमा आनन्द भरेर खुसी हुन सिक्नु होस् । खुसी हुन चाहना राख्ने र प्रयत्न गर्ने मानिसलाई नै परमात्माले पनि साथ दिन्छन् । स्वस्थ्य मनोरञ्जनले घरलाई मन्दिर बनाउनु होस् । तपाईं जति आत्मैबाट खुसी हुन सक्नु हुन्छ त्यति नै तपाईँको प्राणशक्ति बलियो हुनेछ ।
१२. प्रचुर प्राणशक्ति कोरोनामात्र नभएर जुनसुकै रोगबाट पनि हामीलाई बचाउने महत्त्वपूर्ण अश्त्र हो । त्यसैले प्रत्येक समय, व्यक्ति र बस्तुलाई महत्त्व दिँदै आनन्द मानेर तिनको सदुपयोग गर्नुहोस् ।
१३.स्मरण राख्नु होला तपाईँमा प्राणशक्तिको वृद्धि सम्पत्तिले मात्र हुँदैन । मिष्ठान्न वा गरिष्ठ भोजनको व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्तिले अर्थात् सामान्य किसिमका खाना मात्र प्राप्त गर्न सक्ने मानिसले पनि स्वच्छ, सुखी र प्रकृतिपरक जीवनशैली अपनाएर नै प्रचुर प्राणशक्ति आर्जन गर्न सक्छ ।
तपाईँले जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुभयो । तर त्यति हुँदा हुँदै पनि, नियम वा संयममा बसेर पनि यदि कोरोना लागि नै हाल्यो भने के गर्ने ?
मैले अघि नै भनिसकेँ कोरोना लाग्नासाथ मरिँदैन । तर कोरोना लाग्यो भने मर्ने संभावना पनि प्रवल छ ।
१. कोरोना लाग्यो भनेर पटक्कै नडराउनु होस् ।
२. साहसका साथ यसलाई त भगाउँछु भगाउँछु भनेर आफूलाई बलियो बनाउनु होस् । आफूभित्रको आत्मविश्वासलाई जगाउनु होस् ।
३. कुनै पनि रोग वा शत्रुलाई पराजित गर्ने पहिलो उपचार नै आत्मविश्वास हो ।
४. कोरोना लागेपछि सर्वप्रथम आफूलाई क्षत्रीबाहुन परिवारमा मृत्यु संस्कारमा किरियापुत्रीले अपनाउने गरेको १३ दिने छुतछात बारेर बस्ने खालको जीवनशैली अपनाउनु होस् ।
कोरोना लागेपछि घरैमा उपचार गर्न सकिने केही उपायहरू
क) छुट्टै सुत्ने । बस्ने कोठा र शौचालय पनि छुट्टै व्यवस्था गर्नुहोस् ।
ख) विरामीका लागि छुट्टै चुलो, भाँडाकुँडा आदि सबै नीजि व्यवस्था गर्नुहोस् । यस्तो संभव नभए विरामीले प्रयोग गरेका भाँडाकुँडा घरपरिवारका कसैले संसर्ग नै नगर्नु होस् । या त विरामीले आफ्ना भाँडाकुँडा आफैँ माझ्ने व्यवस्था गर्नुहोस् । यसो गर्न सम्भव नभए कागजका प्लेट अथवा दुनाटपरीको प्रयोग गरेर ती प्रयोग भएका सरसामान पनि खाडल खनेर पुर्ने अथवा त्यसलाई अरू कसैको संसर्ग नगराउनु होस् । त्यस्ता भाँडाकूडा वा लुगाफाटो घाम लागेको ठाउँमा सुकाउने व्यवस्था गर्नु होस् ।
ग) परिवार र बाहिरी व्यक्ति वा बस्तु कसैसँग पनि छुतछात नगर्नुहोस् वा संसर्ग गर्नबाट कडा तरिकाले बार्नुहोस् ।
घ) प्रत्येक आधा घण्टामा आधा गिलास तातो पानी चिया जस्तै गरी खाने गर्नु होस् ।
ङ) प्रत्येक दुई घण्टामा बेसार, अदुवा, सोँप, जिरा, ज्वानु, अदुवा, तुलसी, तेजपत्ता, टिम्मुर र सिँधे नून मिसाएर पकाएको पानी एक एक गिलास पिउने गर्नुहोस् ।
च) प्रत्येक दिन एउटा सिँगै कागती निचोरेर, संभव भए दुई चम्चा मह र एक चम्चा बेसार मिसाएको शर्वत पिउने गर्नुहोस् ।
छ) भिटामीन सी र आइरन पर्याप्त मात्रामा हुने फलफूल र हरियो तरकारीलाई प्राथमिकता दिनुहोस् । अङ्कुरित अन्न तयार गरेर खानु सर्वोत्तम हुनेछ । फलफूलका साथै कोरोनाको संक्रमण अवधिभर राम्रो कम्पनी निर्मित भिटामीन सीका गोली सेवन गर्नु होस् ।
ज) कोरोना संक्रमण अवधिभर दिनमा कम्तिमा चारपटक सादा तातो पानीको वाफ अनिवार्य लिनुहोस् । किनभने कोरोनाले हाम्रो फोक्सोमा आक्रमण गर्ने हो । केवल तातो पानीको वाफले मात्र फोक्सोमा बसेको कोरोनाका भाइरस र त्यसको तीव्र वृद्धिदरलाई नास पार्न सकिन्छ ।
कोरोना लागेका व्यक्तिले यति नियम पुर्याउन सकेमा अस्पताल भर्ना हुन जानू पर्दैन । कुनै डाक्टरसँग सल्लाह लिएर असल कम्पनीबाट उत्पादित साधारण सिटामोलका गोलीले मात्र यसलाई निको पार्न सकिन्छ ।
वृद्ध, लामो समयदेखि कुनै रोगसँग लडिरहेका व्यक्ति, गर्भवती महिला र साना बालबालिकाका सन्दर्भमा सम्बन्धित चिकित्सकीय परामर्श लिनु उपयुक्त हुनेछ ।
कोरोना भनेको ठूलो खालको रुघाखोकी मात्र हो भनेर बुझ्नु होस् । तर यसको वेवास्था गरे यसले मार्न बेर लाउँदैन र संक्रमित व्यक्तिले जथाभावी संसर्ग गरेमा आफूमात्र नभएर आफ्नो परिवारमात्र नभएर, समूह र समूदायकै सर्वनाश हुन सक्ने कुरामाथि विचार गरौँ र सावधान रहौँ ।
यति खतरनाक हुँदाहुँदै पनि सतर्कता राख्न सकेमा यस संक्रमणबाट सहजै बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि राम्ररी बुझ्नुहोस् ।
खास गरेर पहिलेदेखि नै अन्य रोग लागेका व्यक्तिहरू, ७० वर्ष उमेर नाघेका वृद्धवृद्धाहरू, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका साथसाथै १० वर्ष मुनीका बालबालिका संक्रमणको अत्याधिक जोखिममा हुन सक्छन् । त्यसैले परिवारमा तिनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्नुहोस् ।
हामी कसैलाई कोरोना नलागोस् । कथम्कदाचित लागि नै हाल्यो भने पनि स्वनियन्त्रणमै निको होस् ।
सबैमा शुभकामना !
शिक्षाविद जोशीको निधन
नाइजेरियामा बलात्कार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियान
डिग्री सकाइन् मलालाले